Akanjo, lamba tsy misy tenona, lamba tenona - Anbzeng
Tsy misy lamba tenona
momba ny antsika ANBZENG
SHIJIAZHUANG ANBZENG IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. dia orinasam-panondranana lamba sy akanjo ampiarahana amin'ny fanamboarana sy ny varotra, miankina amin'ny varotra iraisam-pirenena indrindra. Ny orinasanay dia ao Shijiazhuang City any amin'ny faritanin'i Hebei, miaraka amina fotony fanamboarana mandroso sy ekipa matihanina manokana ao amin'ny faritanin'i HEBEI.
Ny orinasanay dia manana departemanta roa, ny iray dia ny Departemantan'ny fitafiana, ny iray kosa ny Sampan-damba.
Vokatra --Apparel: akanjo, palitao, pataloha jeans, lobaka, T-shirt, zipo, pataloha, pataloha fohy, lamba ivelany, akanjo ivelany sns.
Vokatra vita amin'ny lamba: landihazo, T / C, CVC, loko, denim.
Cvc 8 Wales Corduroy lamba ...
28 Wales Corduroy lamba TH ...
Tr Twill lamba S3162
Lamba twill -S20170302
Ny fialamboly mamorona lamba famoronana akanjo
Ny fanamboarana lamba koa dia azo lazaina ho endrika faharoa amin'ny lamba fitafiana. Izy io dia manondro ny fanodinana faharoa ny lamba vita araka ny endriny mila mamokatra vokatra ara-javakanto vaovao. Io dia fanitarana ny hevitry ny mpamorona ary manana fanavaozana tsy manam-paharoa. Mahatonga ...
1. chiffon Ny lanezy artifisialy dia tsy misy amin'ny lamba fitafiana fahavaratra, vita amin'ny akora fibre simika, no kodiaran'ny akora. Ny lamba Chiffon dia tsy mahazaka tonga lafatra, ary ny vatany ambony dia manana pendant voajanahary sy voajanahary, fahatsapana milay sy mamelombelona, ​​ny fitafy tsara tarehy. Fa chiff ...
Fitaovana voajanahary madio
1. Lamba rongony vita amin'ny rongony, tsy ilaina intsony ny milaza azy fa ny akanjo fahavaratra no manakaiky azy. Mamela ny hoditra hifoka rivotra, fa ny fofonaina ihany koa dia tsy manome anao hatsembohana tsy misy tomika, tsy misy olana amin'ny herinaratra tsy miovaova, malefaka ihany koa ny mikasika azy, ny olona mahazaka olona dia sariaka indrindra. Ankoatr'izay, ny lamba mihitsy dia ex ...
Room 13A03, Tranon'ny fandraharahana ao Guoda Chain, NO173 Shuiyuan Street, District Xinhua, Shijiazhuang, Hebie, Sina